BokaHigh: Tsvagiridzo uye Teedzera Yako Blogger Kuparadzira | Martech Zone
Muvhuro, Zvita 3, 2018 Mugovera, December 8, 2018 Douglas Karr
Shamwari Chris Abraham akanyora nezve blogger yekuwana mhinduro inonzi GroupHigh. BokaHigh's online chikuva inopa zvese zvinhu zvaunoda kuita blogger kusvika.
GroupHigh inoita kuti iwe ugone kuwana mabloggi nyore nyore kune ako ekushambadzira macampaign kuburikidza ne yavo chaiyo-nguva blog yekutsvaga uye kusefa interface. Dhata inosanganisira misoro, localization, blog ruzivo, magariro account, fan uye muteveri data, organic yekutsvaga masimba (kubva kuMoz) uye traffic stats kubva kuCompete.com uye Alexa. Ipuratifomu inobvumira vashandisi kuti vawane, vateedzere uye vape mablog mumishandirapamwe. Iwe unogona zvakare kugadzira blogger zvinyorwa nekutora ma URL kubva kumaspredishiti.
Traffic kusangana inosanganisira iyo blog yemwedzi vashanyi vashanyi, peji maonero, uye mapeji-per-kushanya. Zvakare, iwe uchaona metrics yekudyidzana kusangana pa Twitter, Facebook, Youtube, Google+, LinkedIn, Pinterest, uye Instagram pamwe nekukanganisa kwavanoita mabloggi mune yega yega media media chiteshi.
Chikwata cheHurumendeHigh manejimendi manejimendi manejimendi inoita kuti zvive nyore kugadzira hukama hutsva, chengetedza izvo zviripo, kuteedzera hukama ihwohwo, uye kushandira pamwe sechikwata pane zvaunoedza kuita:
Email Kutevera - Ona pawakapedzisira kutaura nemabloggi ako.
Bata Zvinyorwa - Gadzirisa kutaurirana kwako nekuchengetedza ruzivo rwekubatana pane ako blogger vanobatika.
Multi-Mushandisi Kubatana - Wona uye ronga chiitiko chezviitiko kune rako rese timu kana akawanda madhipatimendi.
Zviyeuchidzo Zvekutevera - Nguva nenguva bata-base neako mabloggi uye uteedzere kubatana uku.
Govera maBloggi - Kushanda sechikwata? Ipa mabloggi kunhengo yechikwata kuti vagadzire imwechete yekubatana uye kubvisa njodzi yevanhu vazhinji vanokanda blogger imwe chete.
Wona uye tsvaga zvinyorwa zveblog zvechangobva kuitika pasina kusiya iyo GroupHigh application. Bhukumaki Target Zvinyorwa kuitira kuti kana yasvika nguva yekukanda iwe unogona kutarisa yakatarwa posvo. Ziva kuti blog rave richishanda sei nezvirongwa zvekushambadzira munguva yakapfuura nekutarisa kuti kana ivo vakatora nzvimbo dzevaenzi kana kutora chikamu mune zvigadzirwa zvekuongorora kana kupa. Iwe unogona zvakare kuisa mabhukumaki mablog uye zvinyorwa kubva chero kupi kuenda kune rimwe rako reGroupHigh zvinyorwa.
Zvitsva Zvitsva Zvinosanganisira:
Mwedzi kusvika pamwedzi zvirongwa
Robust yekutsvaga kugona pamamirioni evanokurudzira, mabloggi uye zvitoro zveMedia.
Backlink Discovery pane zvese zvinyorwa
Zvemukati tsvaga pane makumi masere mamirioni mapositi
Kunze kwechero ipi url runyorwa rwekutsvaga kwekukurumidza
Kubatikana pa Instagram, Youtube uye Twitter
Anopfuura makumi mana nemashanu Metrics ekuratidza uye kusefa pane mune zvinyorwa
Kufirita pamusoro peanopfuura makumi maviri nemaviri midhiya mhando
Kuwedzera kwakasimba kugadzirisa uye ruzivo rwekuonana kune zvese zvinyorwa
Zvemukati kusangana metric, kuteedzera uye kuburitsa
Kupararira kwepasirese pamitauro 26
Tags: blogger inosvikachris abrahamtsvaga mablogikitsvaga vanokurudzirachemoniInfluencersoutreach
Maitiro Ehutsinye, Akapaza Subdomain Akawana Yangu Yekutanga Domain Mune Dambudziko neGoogle!